सम्पर्क दुबई सिटी कम्पनी हामी Expats को लागि पर्खिरहेका छौं
हामीलाई सोशल मिडियामा राख्नुहोस् | दुबई सिटी कम्पनी
दुबई सिटी कम्पनी विश्व स्तरीय दुबईको गाइड र एक रोचक कहानी उद्धार गर्दछ। हामी एक रचनात्मक कम्पनी हो जसका साथ धेरै विचारहरू अगाडि फर्वार्डिङ मार्केटिंग मार्केटिंग सोशल मिडिया प्रमोशनहरू छन्। हामी मध्य पूर्वमा व्यापार मूल्य चलाउन सामाजिक अन्तरदृष्टिको शक्तिमा विश्वास गर्छौं।
दुबई सिटी कम्पनी - फेसबुक
दुबई सिटी कम्पनी - ट्विटर
दुबई सिटी कम्पनी - पिनटर
दुबई सिटी कम्पनी - इन्स्टाग्राम
दुबई सिटी कम्पनी - Angel.co
दुबई सिटी कम्पनी - Behance
दुबई सिटी कम्पनी - यूट्यूब
अनुरोध सदस्यता रद्द गर्नुहोस्
सदस्यता रद्द गर्नुहोस्: रोजगार खोजी र भिसा
ठीक ठाउँमा फिर्ती, कुनै प्रश्न सोधेको छैन।
सबमिशन पुनःसुरु गर्नुहोस्
अपलोड CV: दुबई शहर कम्पनी
अब: तपाईं हाम्रो कम्पनीमा नि: शुल्क CV अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ
यदि तपाईंसँग पैसा छैन भने? तपाईं हाम्रो टीममा तपाईंको अपडेट गरिएको सीभी पठाउन सक्नुहुनेछ:
resume@dubaicitycompany.com हाम्रो टोलीले तपाइँको विवरणहरूमा एक नजर राख्नेछ। हामी तपाईंलाई अधिक जानकारीको साथ सन्देश पठाउनेछौं।
एक जानकारी अनुरोध बनाउँदै
अब: हाम्रो टोलीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्
यदि तपाईं अधिक जानकारी प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईं हाम्रो टीमलाई सूचना अनुरोध पठाउन सक्नुहुनेछ:
office@dubaicitycompany.com हाम्रो टीमले तपाइँको अनुरोधमा एक नजर राख्नेछ र तपाइँसँग3दिन भित्र फिर्ता आउनेछ।
लन्डन सिटी, यूनाइटेड किंगडम
दुबई सिटी, संयुक्त अरब अमीरात
डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम नीति - DMCA
गोपनीयता नीति - नीति
शर्त र शर्त - नियम
कम्पनी नाम: दुबई सिटी कम्पनी
कम्पनी नम्बर 09578474
हमसे संपर्क गर्नुहोस - दुबई सिटी कम्पनी तपाईंको लागि पर्खिरहेको छ!
अधिक जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। किनकि दुबई सिटी कम्पनी ग्राहक सेवा टोली। निश्चित रूपमा तपाईंको प्रतिक्रियाको लागि पर्खँदै छ। यदि तपाइँ सम्पर्क गर्न चाहानुहुन्छ भने। एक भर्ती प्रतिनिधिहरु। संयुक्त अरब अमीरातमा कृपया हाम्रो कम्पनी इमेल प्रयोग गर्नुहोस्। हाम्रो कम्पनी सँधै नौकरी चाहने को स्वागत गर्दछ। थप प्रश्नहरूको लागि दुबईमा सोध्नुहोस्, हामीलाई थाहा दिनुहोस्। विशेष गरी यदि तपाईं मध्य पूर्वमा रोजगारीको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ, हामी सधैँ नयाँ प्रयोगकर्ताहरूलाई स्वागत गर्दछौं अपडेट पुनः सुरु गर्नुहोस्। हामी दुबई मा खोज परामर्श एजेन्सी को एक प्रमुख नौकरी हुन को लक्ष्य हो।
दुबई सिटी कम्पनीले कर्मचारीहरूलाई भेट्न भर्ती कम्पनीहरूलाई सहयोग पुर्याउछ। हामी सबै जागिर खोज व्यवसायहरूसँग काम गरिरहेका छौं। हाम्रो काम रोजगारी समाधानको पहिचान हो। संयुक्त अरब अमीरात मा विदेशियहरुको लागि। यसबाहेक, हाम्रो महत्वाकांक्षाले हामीसँग तपाइँको व्यवसायिक लक्ष्यमा फिट हुन्छ। तपाईं खोज्दै हुनुहुन्छ व्यवस्थापन कार्यहरू भेट्टाउन। अति कुशल बिक्री स्थिति वा पनि एक बैंक र वित्त क्यारियरका अवसरहरू। प्रविधि र कानुनी क्यारियर। साथै मानव संसाधन अवसरहरू। दुबई सिटी कम्पनीले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। बाटोको हरेक चरणको साथ।
दुबईमा भर्खरका भर्ती विशेषज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नुहोस्!
वास्तवमा, हामी लामो समयको लागि सहयोग हात दिइरहेका छौं। यद्यपि यो सत्य हुन सक्छ। तर 1 मिलियन नौकरी खोज आगंतुकों भन्दा बढी। दुबईमा एक नौकरी खोज्नको लागी हाम्रो कम्पनीमा ध्यान राखियो। यस कारणको लागि, हामी दुबई मा निर्यात को लागि नौकरी खोजी गाइड पोस्ट गर्दै छन्। चाहे तपाईं कहाँ हो? हाम्रो नजर राख्नुहोस् दुबई ब्लग एक्सटेट्सका लागि। र नतिजाको रूपमा, तपाईंको सपना रोजगारी दुबईमा हाम्रो करियर खोजी कम्पनीको साथ फेला पार्नुहोस्। ती परिस्थितिहरूमा हामी विस्तृत गाइडहरू बहस गरिरहेका छौं। उदाहरणका लागि, तपाईं सक्नुहुन्छ CV अपलोड गर्न दुबईमा दुबई। र कसरी पत्ता लगाउनुहोस् खाडीका कामका लागि सम्पर्क कम्पनीहरु। सबैले संयुक्त अरब अमीरातमा कामको लागि तपाईंको मौका उच्च हुनेछ।
दुबई सिटी कम्पनी सम्पर्क गर्नुहोस्